Emzimbeni womuntu, kanye nabanye neurotransmitters, enifeza ukudluliswa inkanuko yonkana emqhokrweni izinhlaka zokuxhumana zobuchopho phakathi izinzwa, kukhona acetylcholine. Yena unesibopho kwamanyuroni nokuxhumana neuronal futhi okuyisisekelo i-parasympathetic isimiso sezinzwa. Uma nganoma isiphi isizathu, ketshezi uqala ukukhiqiza okwedlula ukuthi umuntu angalihlambalaza ukuthuthukisa isifo - urticaria cholinergic.
Kulesi sihloko sizoxoxa izizathu lapho ivela khona futhi ukwelashwa.
ulwazi olujwayelekile mayelana urticaria cholinergic
Lathi sifo ngempela ezingavamile. It ebangela akukho kuka-8% inani eliphelele amacala urticaria. Kuyathakazelisa ukuthi iningi labo uhlushwa intsha, nakuba engu noma ubulili imikhawulo lesi sifo alikho.
urticaria Cholinergic esikhumbeni sifana ezishile kusuka amahlamvu sembabazane - ezifana amabhamuza noma obomvu namabala silume ukuthi ukuletha ukungakhululeki eqinile. Kodwa kwezinye izimo ukuqubuka Nokho, awubonakali, Ukulunywa kulokhu iziguli Sikhathazekile, lokungekho ngephansi. Kwezokwelapha, lesi sifo elinye igama - ukulunywa dermatosis.
urticaria Cholinergic: pathogenesis
izimbangela onokwethenjelwa zokugula echazwe namanje akwaziwa. Akekho izifundo kuhlulekile ukufakazela lotawulungisa umthelela oqondile sezakhi ku ukubonakala izimpawu zaso.
Imfundiso owamukelwa ukuthuthukiswa urticaria cholinergic kuze sibopha yokungezwani komzimba ukuze aphule okuthiwa insika amangqamuzana esikhumba yethu. Lokhu kubenza bathandeke kakhulu ezikhethekile amayunithi mzimba ehilelekile amasosha omzimba oluhambelana. A igebe isikhathi lapho nokujuluka umuntu emiphumeleni ukushisa zangaphandle, bakhulise izinga lokushisa zangaphakathi noma ukucindezeleka isikhashana, cuphuluza ukukhululwa acetylcholine.
Ingabe cholinergic urticaria izimbangela, ngaphezu okungenhla, akwaziwa, kodwa imithi ukuhlukanisa 3 eziyinhloko ukuthi kungabangela:
Ukusabela sokugembula ukuba nemiphumela ezishisayo.
iziyaluyalu Kuyatholakala (izifo endocrine, emathunjini bese vegetovascular noma cardiopsychoneurosis).
Futhi ukuthuthukiswa urticaria cholinergic iqala kuphela uma umuntu kanye nezici ezithile ukuze komzimba kanye hypersensitivity kuya acetylcholine ngesikhathi esifanayo.
Izimpawu zesifo avele ngokushesha ngemva kokungenwa isici kuyacasula futhi kunzima ukudida onezimpawu ngaphezulu.
I Bubbles lokuqala elincane avele, isikhumba azungeze ngokuvamile iba edematous futhi hyperemic.
Ngokuvamile, ukuqubuka liyavela entanyeni, eduze entanyeni, ngemilenze nasesifubeni. Ingxenye engezansi yomzimba is i inikwe amandla ngempela ezingavamile.
Amagwebu batshelwa kanzima futhi abangele umuzwa esivuthayo.
Cholinergic urticaria, izimpawu okuyinto esizoyicabangela kulesi sihloko, futhi uvame ukuhambisana ukwanda lokushisa.
Ngenxa yokuthi acetylcholine kuyinto neurotransmitter isimiso sezinzwa, ukuzwela ngokweqile kungabangela ukubonakaliswa ngokweqile umsebenzi wayo - nohudo, ukucanuzela kwenhliziyo, ukuhlanza, amathe ngokweqile.
urticaria Cholinergic sitholakale kalula. Ukuze isinqumo bayo obujwayelekile zocwaningo laboratory ngokungenzeleli nangesihe anamnesis. Futhi ngenxa yokuthi i-ukubonakaliswa lokuqala isifo zibonakala ngokushesha ngemva ingqondo umthelela iyiphi yezinto engenhla, isiguli Ungahlala ngokunembile izikhangiso kwanele ukuba wazi ukuthi yini ngempela kwaba imbangela isifo.
Ukuze sicacise uphethwe eyenziwa ongama izidakamizwa analog noma acetylcholine kuyinto ukuhlolwa inkanuko ngesimo imiphumela ezishisayo esikhumbeni (isandla lokhu lesiguli ibekwe emanzini ashisayo). Uma emva kwemizuzu 20 khona-ke kukhona ukuqubuka, okuyinto kamuva zinyamalale, uphethwe ngeke baphikisana.
urticaria Cholinergic: amakhambi ukwelashwa Folk
Uma nezinye izinhlobo zesifo ingelashwa nge-antihistamine, ama-urticaria cholinergic oluphakeme amelana nabo.
Kulokhu, izidakamizwa okuthiwa kungaba kancane kuphela isikhathi esifushane ukunciphisa izimpawu yokungezwani komzimba. Abacwaningi bathi lokhu kuya hypersensitivity umzimba womuntu ukuze abone ukuthi kwabafaka umfutho kanjani, yena ngokwakhe ukhiqiza.
Eziningana iyashelela kungenzeka 2 noma 3 izizukulwane histamine receptor - "Loratadine", "cetirizine", "ebastine" futhi ngakho kumele ukhethe kuphela wesikhumba abanolwazi, ngiphakamisa umthamo ngamunye kanye ikhumbula imiphumela engemihle ...
Kwezinye izimo, ungase ukuthole amathuluzi awusizo futhi ethandwa:
Ukumnika of licorice impande, okuyinto kudingeka aphuze ingxenye inkomishi kabili ngosuku. I powder wasuswa kule impande for ½ h. L. wageza phansi ngamanzi.
I ukumnika of sembabazane omisiwe. Utshani salokhu uthele amanzi abilayo bese uyinika yenza. Phuza njengendlela itiye kathathu ngosuku.
Ayikho Mint kancane ewusizo futhi chamomile zezinkambi, has a omnene sine izakhiwo. Baphuza itiye esikhundleni black.
Thatha futhi juice kusukela horseradish (izimpande), owawuvela ixutshwe noju endaweni isilinganiso 1: 1. Thatha isipuni kathathu ngosuku.
Ukuqeda ukulunywa nokuvuvukala ukususa, ungenza lotions solution soda, chamomile, ngokulandelana, kalamula buhlanjululwe ngamanzi. Noma yimaphi kula izindlela futhi ukuba afuthwe ngesibulali ngebhandeshi oyinyumba isigamu sehora ngesikhathi izingxenye superposed nge ngamawala. Le nqubo, uma liphindwe izikhathi 4 ngosuku, kungaba lula isimo lesiguli.
Uma isiguli nokukodwa kukho okuye kwatholakala ukuthi banesifo "urticaria cholinergic", ukuze ugweme, kubalulekile babheme ngeke banamathele emithethweni ethile kanye imikhawulo:
Gwema ukusetshenziswa thini ashisayo. Manje ulusizo ushawa cool ukugeza.
Kusukela Ukudla kuyodingeka ukuqeda ukudla okubabayo. ukudla Zezıhlabane ingadala umonakalo.
Kufanele ugweme ajulukayo kokubili ngesikhathi umsebenzi futhi zonke ezinye izimo. Lapho umjuluko kuyadingeka uphumule emthunzini noma ushawa.
It is akhuthalele ukugwema izimo ezibangela ukucindezeleka. Uma lokhu kungeke kwenzeke, isiguli kufanele uthathe sine.
Nini futhi kanjani kuyinto biopsy endometrial?
Ubilise ngomlenze wakhe: Ubangela, zokwelapha
Ukuthembela ekuxhumaneni nomphakathi: ngayiphi indlela?
Basho kumninindlu, inhliziyo - yini okumele ngiyenze?
Indlela ukususa amabele lezwaneni? Indlela enhle
Kuyini yesifo senhliziyo azalwa naso e izinsana?
Loshitsa - Finca eBelarus, kabusha emlotheni
Akumnandi Winx imidlalo for girls iminyaka 5-12
Ngokuhlakanipha Iwusizo umama osemncane yesimanje
Amazambane e-Korean: iresiphi enemininingwane
Izimpawu zokuncintisana kubantu abadala. Usizo lokuqala lokuncintisana
Induna phezu imilenze kwabesifazane
Okuhle futhi eziyingozi-headphone-amaconsi
Blinds "Usuku-Night": A umdlalo kokuqhathanisa